Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » European Union machibidoro ndị njem America iwu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
European Union iji weghachite mgbochi ndị njem na ndị America
European Union wepụrụ United States na ndepụta njem njem nchekwa n'ihi oke ikpe COVID-19 ọhụrụ.
EU kwụsịtụrụ njem niile na-adịghị mkpa maka ndị ọbịa US.
EU ịmaliteghachi mgbochi njem n'ihi ịwa ahụ US COVID-19.
A ka machibidoro ndị njem EU iwu ịbanye US.
Ndị ọrụ EU tụrụ aro ka ha kwụsị njem niile na-adịghị mkpa na United States ka ọnụọgụ ikpe COVID-19 ọhụrụ US na-agbasa.
Onye isi oche European Commission Ursula von der Leyen
The European Union adụla ndị otu ya ọdụ ka ha wepu United States, Israel, Lebanon, Montenegro na North Macedonia na ndepụta mba ndị dị nchebe maka njem na-adịghị mkpa, n'ihi ịrị elu nke ọrịa coronavirus ọhụrụ na mba ndị ahụ.
Nkwupụta nke European Council na -eme taa bụ nkwanye aka na mba iri abụọ na asaa nke otu a, nke na -ejigide ikike ịchị oke ala ha. Ọ na -atụgharị ndụmọdụ June iji belata mmachi na ndị njem US.
Nkwenye a anaghị agbagha, nke pụtara na a ga -ahapụ mba ọ bụla ka ha kpebie ma ha ka ga -achọ ikwe ka ndị ọbịa US nweta akaebe ịgba ọgwụ mgbochi, ule na -adịghị mma, ma ọ bụ iche.
EC na-emelite ndụmọdụ njem ya kwa izu abụọ, dabere na ọkwa ọrịa COVID-19. Ka a tụlee ya “Nchekwa” obodo ekwesịghị inwe ihe karịrị ikpe ọhụrụ 75 n'ime mmadụ 100,000 bi n'ime ụbọchị iri na anọ.
Dabere na data ọhụrụ, US agbagoro 152,000 COVID-19 ọhụrụ kwa ụbọchị n'izu gara aga, na ọnụ ọgụgụ site na ngwụsị Jenụwarị.
Ọkpụkpụ kachasị ọhụrụ na -akpaghasị ụlọ ọgwụ na ndị ọrụ nlekọta ahụike. Ihe dị ka otu n'ime ngalaba nlekọta ahụike ise enwetala ikike opekata mpe 95%.
Ọnwụ arịala elu - na -eru ihe karịrị 1,000 kwa ụbọchị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị America niile nwere ọgwụ mgbochi COVID-19. Ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ihe dịka ugboro 29 ka a ga-ebute COVID-19 n'ụlọ ọgwụ karịa ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Ka ọ dịgodị, ndị nlegharị anya si EU - na ọtụtụ ụwa ndị ọzọ - ka amachibidoro ịbanye US n'okpuru mmachi amachibidoro n'oge ọrịa.
Na mbido Ọgọstụ, asịrị na nchịkwa Biden na -atụle atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi iji mepee ókèala, mana anụbeghị ihe ọ bụla gbasara atụmatụ ahụ kemgbe.
Na mbido ọnwa a, Onye isi oche European Commission Ursula von der Leyen kwuru na agaghị anabata nnabata a "agaghị adọkpụ ruo ọtụtụ izu".